Waini 4.15: iyo yekuvandudza vhezheni yakagadzirira kuyedza | Linux Vakapindwa muropa
Waini 4.15: iyo yekuvandudza vhezheni yakagadzirira kuyedza
Isaac | | Linux Mitambo, Zvirongwa, chiutsi
Waini inoenderera mberi mukushanduka kwayo uye nega yega kuburitswa rutsigiro rwemavhidhiyo mavhidhiyo rwakagadziridzwa zvakanyanya, chimwe chinhu icho vatambi vanokoshesa kwazvo. Iye zvino yave kuwanikwa Waini vhezheni 4.15 mukuvandudza, kuburitswa kuitira kuti iwe ugone kuyedza nhau dzainounza usati waiswa mutsiga seyakagadzikana. Asi kune avo vanoda yakatsiga vhezheni, unogona kurodha pasi kubva ku webhusaiti yepamutemo yeprojekti Waini 4.0.2. Kuburitswa uku kunotanga kudhirowa rinozove iro ramangwana riri padhuze reiyi emulator yekumisikidza software yemuno yeMicrosoft Windows chikuva pane * nix masystem.
Pakati pekuchinja kwakasanganisirwa muWine 4.15 iwe une akateedzana e tsikidzi dzakagadziriswa. Zvakare kumisikidza kwekutanga kweiyo HTTP sevhisi, kusunungura danda reARM64 mabinari rutsigiro, kutsigira zvirinani kune akawanda monitors pane macOS, kudzora optimizations muRichEdit, uye idzo nyaya dzandataura dzakagadziriswa. Kunyanya, vakaratidza makumi maviri neshanu dzakataurwa zvikanganiso zvakagadziriswa.
Zvimwe zvikanganiso ndezvekare, zvimwe zviri kuitika munguva pfupi yapfuura. Semuenzaniso, ikozvino matambudziko ne videogames Zera reDragoni: Mavambo, Titanfall 2, Guild Wars, World of Warcraft, uye hukuru hukuru hweBattlEye, nezvimwe. Mune ino chikamu, ichabatsira mamwe mapurojekiti zvisina kunangana, sezvo sekuziva kwako, Valve inoshandisa Waini sehwaro hweProjekti purojekiti, chinova chinhu kunze kwekuitwa kweWine nekumwe kunatsurudzwa.
Kutenda kuProton, sezvaunenge uchitoziva kana iwe ukaverenga LxA, iyo Steam Play mutengi inobvumira zviuru zvemazita anowanikwa chete kuMicrosoft Windows kuti iwanikwe kubva kune yako GNU / Linux distro. Saka haufanire kumirira zviteshi kuti zviburitsirwe zita raunoda kutamba, nezvimwe. Ichaonekwawo kune avo vanobhadhara rezinesi reCodeWeavers CrossOver, "waini yakabhadharwa" iyo ine zvimwe zvinoenderana nekuvandudzwa zvichienzaniswa neshanduro yemahara mukutsinhana nekubhadhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Waini 4.15: iyo yekuvandudza vhezheni yakagadzirira kuyedza
Kutamba kweshanduro: Firefox 69 ikozvino inodonhedzwa; Firefox 71 inouya kuchiteshi chehusiku
Linux Lite 4.6 inouya neye nyowani tema sarudza uye yakawanda yekuvandudza